Firmware na draịva na Linux: Obere ihe gbasara ihe 2 a | Site na Linux
Linux Post Wụnye | | Na-atụ aro, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Taa, anyị ga-atụle isiokwu nke echiche nke «Femụwe» na «ọkwọ ụgbọala», ebe ọ bụ na ha bụ 2 mkpa echiche n'ihi na ha na-emetụta ndị ezigbo arụmọrụ nke ihe niile Usoro njikwa na a Ngwaọrụ kpebisiri ike.
Ma anyị ga-delve ntakịrị n'ime otú ha abụọ ga-esi jikwaa, na «Firmwares» na «ọkwọ ụgbọala» banyere GNU / Linux.
Ebe ọ bụ, na post a anyị agaghị abanye zuru ezu banyere ihe iwu iwu bara uru ma ọ bụ dị mkpa na mara nkọwa teknụzụ nke Akụrụngwa na Akụrụngwa nke kọmputadị ka ọ dị na mbụ anyị ga-ahapụ njikọ nke ụfọdụ yiri gara aga posts ya mere, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, onye ọ bụla nwere ike ịnweta ha n'ụzọ dị mfe ma mikwuo emi:
Ngwaọrụ kọmputa nwere ngwaọrụ anụ ahụ a na-akpọ ngwaike ụwa, yana ihe ezi uche dị na ya a na-akpọ ngwanrọ. Enwere ngwaọrụ ndị na-enye ohere ịmata akụkụ abụọ ahụ, ma ịmara njirimara akụrụngwa yana iji tụọ arụmọrụ ya na / ma ọ bụ ịchọpụta ọdịda ọ nwere ike. Mgbe ọ dị mkpa ịrịọ nkwado na idozi nsogbu, dị ka ịwụnye ma ọ bụ melite ngwa ngwa ma ọ bụ ọkwọ ụgbọala, ọ dị mkpa ịnwe ike ịnakọta (nakọta) ozi niile enwere ike ma dị mkpa gbasara ngwaike na ngwanrọ nke mejupụtara akụrụngwa. Iwu iji mara usoro (mata ngwaike na ụfọdụ nghazi ngwanrọ)
Ngwaọrụ 3 iji mara ngwaike nke sistemụ gị
inxi: edemede iji hụ n'uju akụrụngwa akụrụngwa nke sistemụ gị
Etu esi ewepụta akụkụ site na Terminal itinye Akwụkwọ Shell
1 Firmware na Driver: Echiche, Myirịta na Esemokwu, na More.
1.1 Gịnị bụ femụwe?
1.2 Gịnị bụ ọkwọ ụgbọala?
1.3 Myirịta na iche
1.4 Njikwa Firmwares na ọkwọ ụgbọala na GNU / Linux
Firmware na Driver: Echiche, Myirịta na Esemokwu, na More.
Gịnị bụ femụwe?
Dị ka weebụ «Definicion.de», a «Femụwe» Ọ kọwara dị ka:
"Firmware ahụ, nke aha ya na-ezo aka na mmemme ahụ siri ike, bụ akụkụ nke ngwaike, ebe ọ bụ na etinyere ya na eletrọniki, mana a na-ewere ya dịka akụkụ nke ngwanrọ ahụ ka ọ na-etolite n'okpuru asụsụ mmemme. O doro anya na ngwa ngwa ahụ na-arụ ọrụ dị ka njikọ n'etiti ntuziaka na-abịa na ngwaọrụ site n'èzí na akụkụ eletriki ya dị iche iche." (Gbasaa info)
Mgbe, web «Sistemas.com» kwupụtara ihe ndị a:
"Firmware ahụ nwere ọtụtụ ntuziaka na-arụkọ ọrụ na kọmpụta ahụ, a na-achọta ha na Naanị Memory (a na-eji ebe nchekwa ROM) nke na-enye ohere ịchịkwa na ịchọpụta arụmọrụ na ọkwa eletriki eletrik nke ngwaọrụ ma ọ bụ mmekọrịta ya na otu." (Gbasaa info)
Gịnị bụ ọkwọ ụgbọala?
Dị ka weebụ «conceptodefinicion.de», a "Ọkwọ ụgbọ ala" Ọ kọwara dị ka:
"Otu n'ime ngwanrọ ngwanrọ, nke na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ na onye njikwa nke gburugburu, iji nye ọrụ arụmọrụ. Onye ọkwọ ụgbọ ala (njikwa / njikwa) nke ngwaọrụ bụ ụdị ngwa nke emepụtara nke ọma ka onye ọrụ nwee ike ijikwa mmemme niile arụnyere na kọmputa ya, na mgbakwunye na nke ahụ, ọ bụ maka ịme ngwaike ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, yabụ ọ bụ weere otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa n'ime ndị raara onwe ha nye iji dozie ọrụ nke akụrụngwa." (Gbasaa info)
"A njikwa (ma ọ bụ, ya na Bekee, Driver) bụ ngwanrọ nke ngwanrọ nke na-enye Sistemụ arụmọrụ ohere iji ihe dị na Akụrụngwa nke akụrụngwa, ọ bụghị naanị ihe dị na mpaghara (ya bụ,, kiiboodu) , Onye nbipute ma ọ bụ Moké, na-enweghị ịmata ọdịiche dị ma ọ bụrụ na ọ bụ Mpaghara Input ma ọ bụ Mpaghara Mmepụta) kamakwa na Ngwaọrụ Sistemụ niile edozi, dịka Kaadị vidiyo, Kaadị Kaadị ma ọ bụ ihe ndị yiri ya." (Gbasaa info)
Myirịta na iche
Site n'elu anyị nwere ike wepụ myirịta na ọdịiche ndị a
Ha abụọ bụ ngwaọrụ ngwanrọ ma ọ bụ ngwa ọrụ eji arụ ọrụ (akụrụngwa n'ime ma ọ bụ nke mpụga).
Anyị ga-ahụ ngwa ngwa arụnyere na ngwaọrụ ọ bụla na modul nchekwa ya, ebe a na-arụnye ọkwọ ụgbọala ma na-arụ ọrụ mgbe niile na Hard Drive na Sistemụ arụmọrụ nke ga-arụ ọrụ na ngwaọrụ ahụ.
Femụwe na-anọchite anya ọkwa kachasị elu nke ngwanrọ nke ọ nwere ike iji ngwaike rụọ ọrụ, ebe ọkwọ ụgbọala na-anọchite ọkwa dị elu nke ọrụ.
Ha abụọ dị ezigbo mkpa ma dị mkpa, ebe ọ bụ na ọkwọ ụgbọ ala ziri ezi nke ọma na-emesi ọrụ ziri ezi nke ngwaọrụ na kọmputa ma ọ bụ ngwa njikwa, ebe firmware na-ahụ maka nhazi na mbido mbụ, mbido ya na itinye ya n'ịntanetị. nke ngwaọrụ ọ bụla.
Firmware na-adịkarị mgbagwoju anya imelite, ebe ọkwọ ụgbọala na-adịkarị mfe ịwụnye ma melite, ma aka ma na akpaghị aka.
Njikwa Firmwares na ọkwọ ụgbọala na GNU / Linux
Ozugbo ozi si ka, nlereanya, emeputa na oru nkọwa na ngwaọrụ, site na akwụkwọ, ngwa ma ọ bụ iwu njedebe. Ọ ga-efu naanị n'ihe banyere "Ọkwọ ụgbọala", ebe ị maara ngwugwu nwere ọkwọ ụgbọala ziri ezi. Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ọtụtụ ngwugwu nke "Ọkwọ ụgbọala" ha na-ebu okwu n’aha «Femụwe».
Ọzọkwa, dịka ọmụmaatụ, na GNU / Linux Distros dabere na Debian / Ubuntu, ị pụrụ ịmata nke nchịkọta nwere ụfọdụ ọkwọ ụgbọala na-eji iwu "Apt" ma ọ bụ "apt", dị ka a hụrụ n'okpuru:
Mgbe, maka njikwa nke "Firmwares" nhọrọ kachasị mfe bụ iji ngwa a na-akpọ "Nwelite femụwe" ma ọ bụ naanị "LVFS". Ngwa a makwaara aha ya, "Ọrụ Linux Firmware Service", Ọ bụ ihu ọma:
"Ngwá ọrụ CLI na GUI nke na-arụ ọrụ site na ọrụ (daemon) nke jikọtara na weebụsaịtị "Linux Vendor Firmware Service" ma nwee ike ịchọpụta, nbudata na imelite ngwa ngwa dị mkpa maka ngwaọrụ ndị amata."
Maka okwu anyị, etinyego m na m Usoro njikwa eji, akpọ MilagrOS (Respin dabere na MX Linux) na-eso omume ndị a na iwu iwu:
Wụnye Star Labs PPA Repository: Adgbakwunye URL ndị a na faịlụ «sources.list»
Na-emezu iwu ndị a:
Gbaa ngwa site na Ngwa menu n'okpuru aha «Firmware Update»
Maka ozi ndị ọzọ gbasara ojiji ya site na eserese eserese ma ọ bụ iwu ntanye ị nwere ike ịga ya ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, na saịtị ha GitHub y LaunchPad.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na echiche nke «Firmware y Drivers», nke na-abụkarị isi ihe abụọ dị mkpa n'ime IT, ebe ọ bụ na ha na-emetụta kpọmkwem ezigbo arụmọrụ nke ihe niile Usoro njikwa karịrị otu Ngwaọrụ kpebisiri ike; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Na-atụ aro » Firmware na Driver na Linux: Otu ntakịrị ihe gbasara ihe 2 a